राजा महेन्द्रमाथिको अपमानले जन्माएको अड्डा खारेज गरिँदै | Rajmarga
काठमाडौ । मुलुक संघीय संरचनामा जाँदा स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने क्रममा दर्जनौं विभाग, प्रतिष्ठान तथा सरकारले गठन गरेका आयोगहरू खारेज गरिँदै छ ।
खारेजीमा पर्ने दर्जनौं निकायमध्ये यो समितिको भने महत्व विशेष मानिएको छ । यही समिति हो, जसले धेरै हदसम्म भौगोलिक विकटताका कारण नेपाली बजारसँगको व्यापारमा जोडिन नसकेका धेरै व्यापारीलाई नेपाली बजारसँग जोड्न योगदान पु-याएको छ ।
तर, तत्कालीन समयमा शक्तिशाली रहेका राजा महेन्द्रलाई तिब्बती सिमानामा पुग्दा भएको अपमानपछि राजाको विशेष पहलमा सुरु भएको यो अड्डा गणतन्त्र आएपछि अन्त्य हुन लाग्नुलाई पनि महŒवका साथ हेरिएको हो ।
यो कहानी ३४ वर्षअघिदेखि यही समितिमा रहेर काम गरिरहेका इन्जिनियर विजयराज खनालले सुनाएका हुन् । महेन्द्रसँगै हुम्ला नाका पुगेका सहयोगीलाई उद्धृत गर्दै खनालले भने, ‘नेपालको हुम्ला नाकामा पुग्दा त्यहाँका स्थानीयले राजालाई गर्नुसम्मको अपमान गरे । उनीहरूलाई नेपालमा आफूहरू बसोबास गर्ने गरेको भन्ने थाहा भए पनि उनीहरूको सबै रोजीरोटीको स्रोत तिब्बतसँग नै थियो । उनीहरूले ‘तिमी राजा रैछौ, खाना खाएर जाऊ’ भनेर अपमानजनक व्यवहार गरेपछि महेन्द्र लज्जा महसुस गर्दै फर्किएका थिए । राजधानी दैनिकमा खब छ ।
Previous post: झलनाथले ओलीलाई यसरी थर्काएः पार्टी तपाईको निजी घर हो ?
Next post: कस्ले झोस्यो श्रीलंकामा हिंसाको आगो ? यस्तो रहेछ मुख्य कारण